» राष्ट्रियसभा उपचुनावमा डा. खिमलाल देवकोटा विजयी, रामबहादुर थापा पराजित
राष्ट्रियसभा उपचुनावमा डा. खिमलाल देवकोटा विजयी, रामबहादुर थापा पराजित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा उपचुनावमा डा. खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन् । आज भएको उपचुनावमा देवकोटाले ५ हजार ८८ मतभारसहित विजयी भएका हुन् । देवकोटाका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका रामबहादुर थापाले ४ हजार १४ मत मात्र प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा देवकोटाले ५८ मत हासिल गरी २७८४ मतभार प्राप्त गरेका छन् भने थापाले ४५ मतसहित २१६० मतभार मात्र पाएका छन् । यस्तै, नेमकिपाका कृष्णबहादुर तामाङले दुई मत अर्थात ९६ मतभार पाएका छन् । प्रदेशसभाको मतभार ४८ हुन्छ ।
यसैगरी स्थानीय तहमा देवकोटाले १२८ मत अर्थात २३०४ मतभार प्राप्त गरेका छन् । यस्तै थापाले १०३ मत अर्थात १८५४ र तामाङले २ मत अर्थात ३६ मतभार मात्रै पाएका छन् । स्थानीय तहको मतभार १८ हुन्छ ।
माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको समर्थनमा कलम चिन्हमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका देवकोटालाई एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले समर्थन गरेको थियो । देवकोटा संघीयता विज्ञ हुन् ।
२०७४ माघमा भएको राष्ट्रियसभा चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट विजयी बनेर ६ बर्षका लागि राष्ट्रियसभामा चुनिएका थापाले २०७७ फागुनमा दल त्याग गरेपछि उनको सांसद पद खारेज भएको थियो । त्यसपछि रिक्त भएको स्थानमा आज उपचुनाव भएको हो ।
रामबहादुर थापालाई आज दोहोरो झड्का लागेको छ । उपचुनावमा पराजित हुनुअघि आजै सर्वोच्च अदालतले उनको मन्त्री पद समेत खारेज गर्दिएको छ । सांसद नभएका व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सात जना मन्त्रीको पुनःनियुक्ति बदर गरेको हो । थापालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीको रुपमा पुनः नियुक्ति दिँएका थिए ।
१२देखि१८ वर्ष उमेर समुहलाई लगाउन १ लाख डोज फाइजर खोप नेपाल आइपुग्यो